Na-abụghị Demographics: Tydị nke ndị na-ege ntị na-ege ntị nke na-eme ka mmekọrịta dị nfe | Martech Zone
Daalụ nke ọ bụla guru ị kwenyere na maka ahịa akpaaka, na slack ọ na-enye ndị ahịa ahịa. Ọtụtụ mgbe, anyị na-eji ahịa akpaaka maka itinye aka na nurturing na-eduga. Enwere ike nweta nke a site na mkpọsa mkpọsa, yana ọkwa omume na-ebute omume ka ha mee ihe. Mail jikọrọ ọnụ bụ ozi ọzọ ezitere n’eluigwe. Ohere iji tinye aha onye ọ bụla, otu aha na isiokwu ahụ na ahịrị mbụ nke email gị bụ ọfụma na-enweghị mgbanwe-clincher…
Eziokwu abughi nani ahia akpaaka nwere ike gaa ọtụtụ n'ihu; ọ bụkwa na ya mkpa ịga n'ihu n'ihu. Jiri aha mbụ ha kpọọ ha, mana email gị ndị ọzọ bụ humdrum, e mee-nke ahụ, ọ bụghị nke onwe ma ọlị. Ezigbo ọdịnaya pụrụ iche chọrọ karịa. Kpọmkwem, ọ chọrọ nkewa doro anya, gafere ngosipụta mmadụ, ịmara ndị ahịa, ịghọta ihe ha chọrọ, ma kwuo okwu ozugbo maka mkpa ha.
Nkesa Ahia Ahia Na-agabiga Demographics
Nkebi nke ndị na-ege ntị abụghị ihe ọhụrụ. Ewoo, ọ bụ ya mere na ọ bụghị ihe ọhụrụ na ọ bụ ugbu a iferi kacha nta; a na-atụ anya n'aka ndị ahịa na ụlọ ọrụ ọ bụla. Ọ gụnyere ikewapụ na ịhazi ndị na-ege ahịa azụmaahịa n'ime otu obere ọrụ, dabere na njirimara dị iche iche ha nwere na agwa ha na-ekerịta. Maraworị ihe ọ bụ, mmadụ niile nọ na ya. Ọ na-arụ ọrụ na ọnụ ọgụgụ na-ekwu maka onwe ha.
76% nke ndị na-azụ ahịa na-atụ anya azụmahịa ka ha mara ihe masịrị ha.
Demographics bụ nke mbụ, nke kachasịkarịkarị nke ndị na-ege ntị. Gịnị kpatara na ha agaghị adị? Ha na-ekewapụ mmadụ dị iche iche dabere na isi agwa ha dịka afọ, ebe, na mmekọ nwoke na nwanyị, ịkpọ aha ole na ole. Mana taa, nke a abụghị akụkụ niile na nke njedebe. O zughi ịkọpụta na iche iche dabere na ihe dị ntakịrị dị ka ebe ha si ma ọ bụ afọ ole ha dị. Nke a anaghị eme ka ịhazi onwe ya, ọ gụkwara akwụkwọ. Gị ahịa kwesịrị ka mma.
Azụmaahịa gị kwesịrị ka mma. Nhazi nke ahia na ahia ahia di nkpa maka oganihu di n’ihu.
Pịnye 1: Ngalaba Dabere na Psychographics
Ebe ihe omume igwe mmadu mmadu na agwa anyi onye na-azụ ihe, isi ihe data gbasara uche na-agwa anyị ya mere ndị ahụ na-azụ ya. Azụmaahịa ọ bụla nwere ike iji data nke uche mee ihe iji kpalie ndị na-akpali omume ịzụ ndị na-ege ha ntị. Ndị ụlọ ọrụ na-eme ụdị nyocha a na-elekarị ndị ahịa anya ụkpụrụ, ibi ndụ, ọnọdụ klaasị, echiche, nkwenkwe, na eme ihe kwa ụbọchị.
Nkọwapụta igwe mmadụ
Ego ~ $ 25,000
Na-eche Banyere Ọdịdị
Ọtụtụ Oge mapụtara
Onye Oru Nma; Ọrụ Na-akwagharị
Na-enwe obi ụtọ ezumike
Ihe omuma banyere uche na enye ndi ahia ohere ka ha mee ka ndi ha mara ihe site na otutu uzo. Ihe bara uru, data dị ọcha nkewapụtara nke ọma na-enyere ha aka ikwu okwu n'asụsụ ndị ahịa ha na ọkwa nke mmụọ, ịghọta nke ọma otu ngwaahịa si arụ ọrụ ma jiri ya rụọ ọrụ, yana ilekwasị anya na atụmatụ ndị kachasị amasị ha. Ọ na-enye ha echiche ka mma banyere ebe ngwaahịa dabara na ndụ ha, na-enye ha ike ime ka ozi ha zuo oke na nke a.
Kedu? Nkebi nke uche na-achọ nyocha nke omume dị iche iche nke ndị na-ege ntị tupu ha kee ha. Ọ na-eji nyocha akara aka emebere site na ngwa afọ ofufo dịka nyocha, ajụjụ ọnụ, na ajụjụ iji kpughee ihe ndị ọzọ, isi ihe data gbasara onye ọ bụla so na ya. Ajuju ndi a nwere ike ikpuchi oke onodu ulo oru a. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ B2B na-elekwasị anya na ọrụ a ga-arụ na ajụjụ banyere mmepe ndị ahịa. Ajuju ajuju a na-enyere aka kowaa otua esi dabaa ngwa oru n’ime oru ndozi ndi ahia (ICP) nke ubochi, ya na otu ngwa ahia ha siri mezi ihe.
Cheta. Enwere ezigbo akara n ’ọhaneze na - emezighị emezi na nzuzo. N'ụzọ doro anya, ị ga-anakọta data onye ọrụ naanị na ikike ha, mana ị ga-ahụkwa na ihe ị na-arịọ ha abụghị nke onwe gị ma ọ bụ nke mkpasu iwe. N'ihi nke a, ọ nwere ike isiri anyị ike inweta data gbasara mmụọ. Ezigbo echiche bụ ịnye ọdịnaya nwere mmasị, bara uru, freemium na nkwụghachi maka nkwado ha, ma ọ bụ ohere mmalite-ngwa ngwa maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ mepụtara n'oge na-adịbeghị anya.
Pịnye 2: Nkeji Dabere na Uru Nye Ahịa
Nkebi nke nwere mmasị na-ele anya na ụdị ọdịnaya nke atụmanya, ndu, na ndị ahịa dị ugbu a na-eri. Ọ bụ nkewapụta nkewaziri iji mee ka ndị ọrụ ahụ gbadaa na olulu ahụ, site na ịnyeghị ihe ọ bụla mana uru na nka ka ha na-achọ ngwaahịa ha. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na otu n'ime atụmanya anyị abanyela na listi nzipu ozi anyị n'ihi na ha ebudatara e-mail email-oyi anyị, mgbe ahụ anyị nwere ike itinye ha na otu ndị nwere mmasị na email ozi oyi.
Naanị n'ihi na atụmanya na-agụ ọdịnaya gị apụtaghị na ha ga-azụ ngwaahịa gị.
Nkwupụta a dị n'elu bụ eziokwu. Mana usoro niile nke ire ere dabere na nghọta na ime ka ihe kpatara ngwaahịa m ji baa uru na atụmanya. Ọ bụrụ na m rịba ama na ha na-ebudata ntuziaka email m na-atụ oyi, mgbe ahụ ha nwere ike nwee mmasị karịa ọdịnaya email email oyi dịka isiokwu m blog posts; my 'otu esi chota adreesị email ọ bụla' ije ije.
N'ikpeazụ, ndị na-ere ahịa nwere ike ịgbasawanye mgbasa ozi a ma mee ka atụmanya na-agbada n'ihu olulu ahụ site na ịnye ha ngosi nke ahịa nke ngwaahịa ha. Gwọ ọrụ ha bụ nke a na-ahụ anya, nke nwere ike nweta site na ntinye ha. N'ịga n'ihu, ha na-enwe ike izipu ozi ịntanetị n'ọtụtụ, tupu nyochaa arụmọrụ ha ma bulie arụmọrụ ha maka ọnụego azịza ka mma.
Pịnye 3: Nkeji Dabere na Uru Azụmaahịa
Nkesa nke uru bara uru bu uzo nkewa nke na-atunye atumatu, ndu, na ndi ahia n’otu n’otu gbadoro uru ha n’enye ahia. Nọmalị m agaghị atụle nke a ọkachasị nkeonwe ịkwọ ụgbọala nkewa usoro. Mana, mgbe ihe ọrịa ahụ dakwasịrị azụmahịa ụwa, ọ ga-abụ ọdịiche dị n'etiti nkewa na-adịghị arụ ọrụ na-aga n'ihu.
Ike ịzụta ihe ghọrọ so enweghị atụ. Thezọ oria ojoo a na ụdi mkpọchi ya emetụta azụmahịa dị iche iche na ụlọ ọrụ dị iche iche na-arụ ọrụ kpamkpam. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ eCommerce emeela nke ọma, mana ụlọ ọrụ njem agbadawo ikpere ha. Businesseszụ ahịa na-ere ahịa kwesịrị ịghọta nke a wee banye n'elu ya, na-ekewa ndị ahịa ha dabere na otu esi emetụta ha. Mgbe ahụ, ha nwere ike ịnye ọdịnaya nke onwe, ọmịiko na onyinye iji nyere ndị ahịa ha aka.
Kedu? Ndị azụmahịa kwesịrị iji ahụmịhe ndị ahịa na-enwe mkparịta ụka. Anọla ọdụ cherere arịrịọ ịkagbu; gakwuru ndị ahịa gị ajụjụ ọ bụla gbasara azụmahịa ma ọ bụ ọnụ ahịa ahịa nwere ike ị metụtara ha. Gosipụta mmetụta, mmetụta ọmịiko, mkpakọrịta, na ezigbo ọchịchọ iji nyere ha aka n’oge mkpa ha. Nọrọ otu nzọ ụkwụ n'ihu, ị gaghị ada n'azụ.
Tinye ụlọ ọrụ na brackets dabere na etu ha siri kụọ. Ọ bụrụ na ha ataala ahụhụ, ha nwere ike ịdị na-adịkarị mfe iji uru nke onyinye ego. Ọ bụrụ na ha na-eme nke ọma, ha nwere ike ịdị njikere maka ebupụta ngwaahịa ndị yiri ya.
Pịnye 4: Nkeji Dabere na Njikọ Aka
Ikpeazụ ihe anyị Ngalaba Nke di elu klas bụ ịnwe akụkụ ndị na-ege ntị dabere na otu esi eji akara. Ọ bụ mpaghara nke ọgụgụ nke uche, ọ na-atụlekwa etu atụmanya, ndu, na ndị ahịa dị ugbu a na-esere akara na ọkwa dị iche iche. Ọ bụ mgbasa ozi mmekọrịta, ọ bụ ọnụego emeghe, ọ bụ pịa, na ọ bụ ụdị ngwaọrụ ha jiri eri ọdịnaya ha.
Isi ihe atọ na-eme ka njikọ aka:
Ihe bara uru, ugboro ole, oku na-aga.
Ọ bụrụ na ị maraworị na atụmanya gị anaghị emepe ozi ịntanetị gị, ọ dịghị mkpa igbu oge site n'izite ha ozi ịntanetị ndị ọzọ. N’oge na-adịghị anya, ị nwere ike ịchọpụta na atụmanya na-emepe ozi ịntanetị gị oge niile mana ọ naghị aza. Ọ nwere ike ịba uru itinye ha na otu ndị otu aka dị elu nke mepere emepe ma ọ bụ nwee ike ịchọ usoro mgbasa ozi dị iche.
Nhazi onwe onye bu ule A / B nke uzo okwu ichota ihe ziri ezi nke meghere emeghe ha. A na-enye ya onyinye ịkwa akwa na usoro isiokwu ndị ahụ iji bulie njikọ aka ha na ohere nke ịtụgharị. Ọ na-ezipụ ozi ịntanetị na oge kachasị mma ka ha mepee ya. Ọ na-ezigara ya oge kwesịrị ekwesị, yabụ na ị gaghị emeri ma ọ bụ kpuchie onye na-anabata gị.
Kedu? Enwere ike itinye aka itinye aka na nsonaazụ nsuso email na-esochi mmekọrịta ọ bụla. Ọtụtụ mgbe, nke a gụnyere itinye sọftụwia nke na-etinye obere pikselụ nsuso na ozi ịntanetị. Mgbe emepere pikselụ nsuso ndị a, ọ na-eziga arịrịọ nbudata na sava ndị na-esochi. Nke a na-agụ dị ka a echiche. Site na nke a, ndị ọrụ nwere ike ịhụ onye, ​​mgbe, na ngwaọrụ nke mepere ọdịnaya ha.
Cheta. Naanị m na-ezo aka na email na ihe atụ a n'ihi na ọ bụ ya mere niche m ji dị. Email bu uzo ahia ahia ahia, nke di n'aka. Ka anyị banyere n'afọ ọhụrụ ahụ, anyị na-ahụ ọtụtụ nyiwe na-abịa ebe a, dị ka nkata ndụ, mgbasa ozi mmekọrịta, na nyiwe ime obodo. Anyị ga-esoro mmekọrịta ndị a kwa ma nwee ahụmịhe ahaziri iche na nke ọ bụla dị iche iche.
Nkewa ndị na-ege ntị gafere usoro ọgụgụ mmadụ. Ọ na-ele anya na mkpali ndị na-azụ ahịa na ọnọdụ. Ọ na-eleba anya n'ihe ha chọrọ ya mere i nwere ike inye ha ihe ha chọrọ. Ọ bụ isi ihe na-eto eto taa.
Yabụ ka anyị too.
Tags: emenjikọ akandị na-ege ntịnkwenkweonye na-azụ ahịa na-akpaliozuzu nkewaọkwa klasahịa uru nkewaihe ngosiemail ahịa nkewalifestylesakụrụngwa ahịaNkeji akpaaka ahiankewa ahiaechichekeonweihe omumaprofaịlụ nke uchenkewa uchendị ahịankewaụkpụrụ